१८ वर्षीया छोरीको कुमारित्व परीक्षण गराइरहने र्‍यापर एवं नायक टिआइको खुलासा -
१८ वर्षीया छोरीको कुमारित्व परीक्षण गराइरहने र्‍यापर एवं नायक टिआइको खुलासा
Highlight मनोरञ्जन समाचार
November 12, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on १८ वर्षीया छोरीको कुमारित्व परीक्षण गराइरहने र्‍यापर एवं नायक टिआइको खुलासा
अमेरिकाका चर्चित र्‍यापर एवं नायक टिआइले आफ्नी छोरीको नीजि जीवनबारे अचम्मित गरिदिने खुलासा गरेका छन् । एक कार्यक्रमका बेला र्‍यापरले वर्षको एकपटक आफ्नी छोरीको कुमारित्व ९भर्जिनिटी० परीक्षण गर्ने बताएका छन । उनको यस्तो भनाई पछि उनका प्रशंसक र सिने जगतका हस्तीले रोष व्यक्त गर्न सुरु गरेका छन् ।
अचम्मित भए कार्यक्रमका प्रस्तोताः
टिआइको यो सनसनीपूर्ण खुलासा पछि कार्यक्रमका प्रस्तोता अचम्मित भए । सुरुमा उनलाई टिआइले ठट्टा गरिरहेको सोचे तर पछि उनी आफ्नो बयानका लागि निकै सिरियस भएको देखिएपछि उनी साँच्चै नै जिल्ल परे । र्‍यापरका अनुसार जब उनकी छोरी कलेज जान सुरु गरिन् तबदेखि छोरीले आफूसँग यौनसम्बन्धि कुराकानी गर्न सुरु गरेको बताए ।
छोरीको जन्मदिनको भोलिपल्टै आफूले उनलाई स्त्रीरोग विशेषज्ञकोमा लिएर जाने र सबैकुरा ठिक भए नभएको परीक्षण गर्ने टिआइले बताए । यद्यपि, यो बयानपछि नै र्‍यापरलाई सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताले गाली गर्न सुरु गरेका छन् ।
तीन लाखमा मृगौला किनबेच !
अहमदिया संघद्धारा काठमाडौमा निशुल्क स्वाीस्थ्य शिविर
विश्वकै जेष्ठ नागरिक नुवाकोटमा, सांसदद्धारा आर्थिक सहयोग
March 9, 2020 अखवार अनलाइन
कस्तो छ तपाइको लागि आजको भाग्य ? हेर्नुहोस राशिफल (२०७५ माघ ०१ गते मङ्गलबार)
January 15, 2019 अखवार अनलाइन
सुनको भाउ बढयो, तोलाको ९१ हजार ५०० पुग्यो
July 8, 2020 अखवार अनलाइन
कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद थप
October 24, 2019 अखवार अनलाइन
आज २५६३ औँ बुद्ध जयन्ती, बुद्धले दिएका थिए यस्ता उपदेश
May 18, 2019 अखवार अनलाइन
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को उपाधि राम लिम्बुले जिते
December 8, 2019 अखवार अनलाइन
देशका विभिन्न स्थानमा भारी बर्षा, सतर्कता अपनाउन महाशाखाको सुझाव
पहिरो घर बगाउदा म्याग्दीमा सात जना बेपत्ता
चिनियाँ उच्च राजनीतिज्ञलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध
एस्टन भिल्लामाथि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सहज जीत